Indlu encinci epholileyo-ibhafu kwindalo
Mozhaysk, Moscow Oblast, Russia
Ifama sinombuki zindwendwe onguЕвгений
Indlu - indawo yokuhlambela kwindawo ecocekileyo yendalo yengingqi yaseMoscow. Umlambo omncinci wasentwasahlobo uLusyanka uhamba kufuphi. Kukho ulwandle oluncinci oluneendawo zokuzonwabisa. Indlu inazo zonke izinto zale mihla, indlu yangasese, ishawari, igumbi lomphunga, iTV, iTV yesathelayithi, iWi-Fi. Kufuphi nendlu kukho i-gazebo ye-barbecue, i-barbecue, i-tandoor, i-pool encinci kunye ne-pool enebhentshi yokuphumla.
Le ndlu ikwindawo ye-Snt ejikelezwe kumacala amathathu lihlathi eliphilisayo leConiferous. I-Mozhaisk Reservoir i-5 km kude, ithatha imizuzu engama-30 ngebhayisikili kunye nemizuzu emi-5 ngemoto. Kwaye phambi kwakho uya kuvula ubunzima bamanzi 1 km ububanzi. Ukuloba okugqwesileyo kuqinisekisiwe. Amahlathi akufuphi azele ngamakhowa namaqunube.
Singakwazi kwakhona ukubonelela ngeenkonzo ngokuthanda, i-pilaf, i-barbecue, ukudubula okujoliswe kuyo kwi-air gun, uhambo oluya kwiMyuziyam yaseBorodino. Ungaphinda u-odole isidlo sakusasa esipheleleyo kusasa!
Kuba le yilali yokuhlala, yonke imibhiyozo engxolayo kude kube ngu-22:00
Unokuza nangaliphi na ixesha lonyaka. Ukubhukisha ukusuka kusuku olunye ukuya kwinyanga.